दलान नेपाल : 2017
राजपाद्धारा पदाधिकारी बैठक आब्हान
संशोधनमा मतदान गर्न सवै पार्टीहरुलाई राजपाको लिखित आग्रह
सरकारले संसदमा पेश गरेको सविद्यान संशोधन विद्येयकको छिनोफानो सोमवार लाग्ने भए पछि राजपाले मंगलवार पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ । मधेशको माग सम्बोधन हुनेगरी सविद्यान संशोधन नभएको भन्दै यस अघि भएको दुई चरणको स्थानिय तहको निर्वाचनमा राजपा सामेल भएका थिएन । राजपाको माग सम्बोधनका लागी सरकारले सदनमा पेश गरेको संशोधन विद्येयक सोमवार टुगो लागाउने तयारी सरकारले गरेपछि राजपाले मंगलवार ६ भदौमा पदाधिकारी बैठक गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । उक्त पदाधिकारी बैठकले दुई नम्बर प्रदेशमा हुन गइरुहेको स्थानिय तहको निर्वाचनमा राजपाले भाग लिने वा नलिने कुराको टुगो लगाउने राजपा नेताहरुले दावी गरेको छ ।
at 1:23 AM Posted by Dalan
निर्वाचन वहिष्कार सहित आन्दोलनमा उत्रेको राष्ट्रिय जनता पार्टी प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।
१ असारमा सरकारले २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन २ असोजमा गर्ने निर्णय गर्दै पूर्वनिर्धारित २ गतेको मनोनयन दुई दिन पछि सार्यो । त्यसप्रति पनि असन्तुष्ट हुदै राजपा नेताहरु ३ असारमा आन्दोलन गर्न भनेर मधेस लागे । त्यसै दिन नवलपरासीमा चुनाव विरोधी सभा गरिरह“दा वातावरण तनावग्रस्त भयो र प्रहरीले रबरको गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आयो । उक्त घटनापछि धेरैले ४ असारको मनोनयन प्रभावित हुने आकलन गरेका थिए । तर उक्त मनोनयनमा राजपाकै नेताहरुकै सक्रियता देखियो । रुपन्देहीमा सर्वेन्द्रनाथ सुक्ला, कमलेश्वर पुरी र कपिलवस्तूमा वेजेश गुप्ता निर्वाचन प्रचारमै खटिए ।
at 8:00 PM Posted by Dalan
मिथीलाको पहिचान झल्काउने पान बेचेर तरक्की गरेका जनकपुरका एक स्थानिय व्यापारीको कथा ।
जनकपुरमा थुप्रै पान पसल छन् तर कैलाश पान पसल सबैभन्दा बढी ग्राहक आउने थलो हो । जनकपुरको जनक चौकमा अवस्थित यो पान पसल जनकपुरीयाहरुको लागि मात्र नभई पानका पारखीहरु माझ निकै प्रचलित छ । आफ्नै नामबाट पान पसल चलाएका कैलाश साहलाई पानले दामसंगै प्रसिद्धि दिएको छ । ५३ बर्षीय साह प्रत्येक दिन विहानै ७ बजे पान पसल खोल्छन् । त्यसपछि दिनभरी पान लगाउनबाट फुर्सद हुदैंन उनलाई । सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, कलाकार, पत्रकार, नेता सबैखाले पानका शौखिन ग्राहकहरुले साहको हातबाट लगाइने पान खान पसल धाउने गर्छन् । विहे र विभिन्न पार्टीहरुमा समेत साहको पसलबाट विशेष रुपमा पान पठाउन अर्डर दिने गरिन्छ ।
निर्वाचन सार्ने सरकारको निर्णय राजपाद्धारा अस्विकार ।
at 7:34 AM Posted by Dalan
आन्द्योलन जारी राख्ने ।
सरकारले प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन सारेर असोजमा गर्ने गरेको निर्णयलाई राष्टिय जनता पार्टी नेपालले अस्विकार गरेको छ । राजपाको शुक्रवार बसेको बैठकले सरकारको निर्णय अस्विकार गर्दै घोषीत आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत राख्दै आउदो ४ गते मधेश थरुहट बन्दको आब्हान समेत गरेको छ । सरकारले २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन सार्दै अन्य प्रदेशका २ असारको उम्मेदवारी मनोयनलाई ४ असारमा गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । राजपाको बैठकले मधेशका पुर्व र पश्चिमका थरुहट सहित लिम्बुवान क्षेत्रमा समेत निर्वाचन सारेर सविधान संशोधन हुनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
दोस्रो चरणको निर्वाचन विरुद्ध राजपाको आमहडताल सुरु
आफुहरुको माग सम्बोधन नगरी सरकार र प्रमुख दलहरु स्थानिय तहको निर्वाचन गराउन लागेको भन्दै राष्टिय जनता पार्टी नेपालले मंगलवार देखि तराई मधेश सहितका क्षेत्रमा आमहडताल सुरु गरेको छ । गएको आइतवार राजपाले आन्दोलन घोषणा गर्दै स्थानिय तहको आसन्न दोस्रो चरणको निर्वाचनमा समेत भाग नलिने र त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने जनाएको थियो । घोषीत आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार राजपाका नेताहरुले मंगलवार विहानै देखि आमहडताल गराउन उत्रिएका थिए । तराई मधेशको पुर्व विराटनगर देखि पश्चिममा नेपालगंन्ज सम्म बन्दको प्रभाव परेको राजपाले जनाएको छ ।
राजपाका पाच ओटा अध्यक्ष भोली देखि मधेशमा आन्दोलनको कमाण्ड गर्ने
सोमवार मधेशमा राजपाद्धारा मसाल जुलुस । भोली देखि ४ दिने आम हडताल
स्थानिय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको राष्टिय जनता पार्टी नेपाल आफना ५ जना अध्यक्षहरुलाई भोली देखि मधेशमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्न खटाउदै छन । आइतवार राजपाले घोषणा गरेको आन्दोलन कार्यक्रम अनुसार भोली मंगलवार देखि ४ दिने आम हडतालत तराई मधेश क्षेत्रमा हुदै छ । निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोयन कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर घोषणा गरिएको ४ दिने आम हडताल अघि सोमवार राजपाले तराई मधेशका सवै सदरमुकामहरुमा मसाल जुलुस निकालेका थिए । मसाल जुलुसमा रानपाका नेताहरुले राष्टिय झण्डा समेत बोकेका थिए ।
राजपाद्धारा दोस्रो चरणको निर्वाचन लक्षित बन्द हडताल घोषणा
राजपा सहितको संघिय गठवन्धनले आफुहरुको माग पुरा नभएको भन्दै दोस्रो चरणको स्थानिय निर्वाचनमा समेत भाग नलिने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन । आइतवार पत्रकार सम्मेलन गरेर राजपा र गठवन्धनका संयोजक महन्थ ठाकुरले सतारुढ पक्षहरु संगको पछिल्लो संवाद असफल भएको भन्दै आन्दोलनमा जान लागेको जानकारी गराएका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा ठाकुरको हस्ताक्षरमा जारी गरिएको गठवन्धनको विज्ञिप्त अनुसार दोस्रो चरणको निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोयन देखि मतदान सम्मका कार्यक्रमहरु लाई लक्षित गरेर बन्द, हडताल घोषणा गरिएको छ ।
आन्दोलनका लागी परिचालन समिती गठन गर्न संघिय गठवन्धनको निर्देशन
राजपा सहितको संघिय गठवन्धनले निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आन्दोलन गर्न स्थानिय स्तरमा परिचालन समिती गठन गर्न निर्देशन दिएको छ । २५ जेठ विहिवार राजपा र गठवन्धनको घोषीत विरोध कार्यक्रम सकिए लगत्तै संयोजक महन्थ ठाकुरले एक विज्ञिप्त निकाल्दै स्थानिय तहमा वडा सम्म र निर्वाचनका लागी लागी सरकारले निर्धारण गरेको वुथ केन्द्रित आन्द्योदन परिचालन समिती गठन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
संशोधन बिना निर्वाचन अस्वीकार – महन्थ ठाकुर
at 12:48 AM Posted by Dalan
जनकपुर - राजपाका संयोजक महन्थ ठाकुरले संविधान संशोधन नहुन्जेल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले कुनै पनि निर्वाचन स्वीकार नगर्ने बताएका छन । गएको मंगलवार मात्रै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा ३ बुदे सहमती गरेर भाग लिएको राजपा माथी विभिन्न आशंकाहरु व्यक्त भइरहदा ठाकुरले यस्तो बताएका हुन ।
ठाकुरले आफुहरुको माग बमोजिम सविधान संशोधन नगरिकन मधेश तराईमा चुनाव गराउन खोजीए आफुहरुको त्यसमा अवरोध समेत खडा गर्ने चेतावनी दिए ।
सतारुढ गठवन्धनद्धारा राजपा र फोरम नेपाल संग पुन तीन बुदे सहमती ।
नेपाली काग्रेस र मओवादी केन्द्रको वर्तमान सतारुढ गठबन्धनले मधेशी पार्टीहरु संग पुन तीन बुदे सहमती गरेको छ । गठवन्धनको तर्फवाट नेपाली काग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा मंगलवार बन्न लाग्दा यस्तो सहमती भएको छ । यही गठबन्धनले गएको साउनमा समेत मधेशी मोर्चा र संघिय गठवन्धनसंग तीन बुदे सहमती गरेको थियो । त्यती वेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न लागेका थिए । मंगलवार पुन सतारुढ गठवन्धनले गएको साउनमा भएको ३ बुदे सहमती कार्यन्वयन र स्थानिय तहको संख्या वढाउने गरी नयां सहमती गरेको हो ।
राजनीतिक दलहरूबीच दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि सहमति नबन्दा मधेश अन्योलता छाएको छ ।
जनकपुर - जनकपुरको रामानन्द चोकमा लहरै रहेका चिया पसलहरूमा अचेल झन् भीडभाड छ । बिहानदेखि बेलुकीसम्म हुने जमघटमा मुख्य चर्चाको विषय हुन्छ, दोस्रो चरणको निर्वाचन, राजपाको आन्दोलन, उपेन्द्र यादवको निर्वाचनमा सहभागिता र प्रमुख दलहरूबीच काठमाडौमा हुने छलफल र वार्ता ।
चुनाव होला कि नहोला ? राजपाले चुनावमा सहभागी हुन्छ कि हुदैन ? आदि यस्तै विषयहरूमा ‘चिया गफ’ चलिरहेको हुन्छ । चिया गफमा रमाइरहेका युवा मनोज साह निर्वाचन र राजपाको आन्दोलन दुवैप्रति संशय व्यक्त गर्दै थिए । कतारको एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा फाइनान्स म्यानेजरको रूपमा कार्यरत साह पछिल्लो एक महिनादेखि बिदामा घर आएका छन् । उनी भन्छन्, ‘मधेश आन्दोलनलाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन नगरी प्रमुख दलहरूले पेलेर अघि बढे चुनाव हिंसात्मक हुन सक्छ ।’
३१ वैशाखमा तीन वटा प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने दोस्रो चरणको निर्वाचन ३१ जेठबाट सरेर ९ असार हुँदै १४ असारमा हुने भएको छ । पटक पटक चुनाव सर्दै गरेको र दलहरूवीच सहमति नभइसकेको अवस्थामा जनकपुरमा अधिकांश एउटै प्रश्न गर्छन्, के दोस्रो चरणको निर्वाचन मधेशमा होला ?
महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र विजय गच्छदार विच भोली संयुक्त बैठक बस्दै
भोली नै मधेशी मोर्चा र संघिय गठवन्धनको समेत बैठक बोलाउने तयारी
सतारुढ दलहरुले मधेशी पार्टीहरु संग गरेको सहमती विपरित संविधान संशोधनको सम्भावना अन्तय गरे पछि मधेशका तीन ओटै शिर्ष नेताहरु भोली संयुक्र रुपमा छलफल गर्दै छन । पछिल्लो समयमा एक आपसमै तिक्क्ताहरु व्यक्त गर्दै आएका मधेशी शिर्ष नेताहरु महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र विजय गच्दार विच भोली बैठक बस्दै छ । तीन शिर्ष नेताहरुले विना संशोधन सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा अघि वढन थाले पछि मधेशी शक्तिहरु आपसमा एक भएर कसरी अगाडी वढने भन्ने वारेमा रणनिती बनाउन लागेका छन । खासगरी पछिल्लो समयमा मधेशी मोर्चा सम्बद्ध ६ ओटा पार्टीहरु एक भए पनि उपेन्द्र यादव संगको सम्बन्ध चिसिएको जस्तो देखिएको थियो । पछि संघिय गठवन्धनको नेतृत्व ठाकुरलाई सुम्पिए पछि यादव चिढिएका मात्रै थिएन वरु राजपाका नेताहरुप्रति विभिन्न कटाक्षहरु समेत गर्न भ्याएका थिए । राजपाका नेताहरुले यादवलाई निशाना पारेर केहि अभिव्यक्ति दिएपछि मधेशी शक्तिहरु एक आपसमा टाढिएका थिए ।
राजपाका अध्यक्षहरु काग्रेस सभापति र प्रधानमन्त्रीलाई वुधवार भेटदै
सोमवार प्रधानमन्त्रीले राजपाका अध्यक्षहरुलाई वोलाएर आफनो धारणा सुनाए पछि राजपाका नेताहरु त्यस माथी छलफल गरेर भोली वुधवार काग्रेस सभापति र प्रधानमन्त्रीलाई भेटदै छन । पहिलो चरणको निर्वाचन आइतवार सम्पन्न भएसंगै सोमवार विहानै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले राजपाका अध्यक्षहरुलाइ डाकेर आफुले संशोधन चाह्दा चाह्दै पनि गर्न नसकेको गुनासो पोखेका थिए । प्रचण्डले मन्त्रीपरिषदवाट हुनै सवै कामहरु यही हप्ता गरिदिने र त्यसकै आधारमा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा राजपालाई भाग लिन आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पछि राजपाका अध्यक्षहरुले आफुहरु छलफल गरेको जवाफ दिने बताएका थिए । राजपा स्रोतका अनुसार अध्यक्ष मण्डल हिजो दिउसो र आज गरी त्यसमाथी छलफल गरेका थिए । छलफल पछि भोली वुधवार राजपाका अध्यक्षहरुले नेपाली काग्रेसका सभापति र प्रधानमन्त्री दुवैलाई भेटेर आफनो धारणा सुनाउने सम्बद्ध स्रोतको भनाई छ ।
राजपा र प्रधानमन्त्री विच छलफल
at 8:17 AM Posted by Dalan
राजपाद्धारा मधेशमा मोटरसाइकल जुलुस
पहिलो चरणको निर्वाचन भएको भोली पल्टै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नवगठित राष्टिय जनता पार्टी राजपा संग छलफल गरेको छ । विना सविधान संशोधन दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग नलिने वताउदै आएका राजपा संग प्रधानमन्त्री वर्तमान सरकार गठन भएको वेला भएको सहमती सहित दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्बन्धमा समेत छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार बैठकमा भएको उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री र राजपाको तर्फवाट अध्यक्षहरु मात्रै सहभागी थिए । राजपाका एक अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारीले प्रधानमन्त्री संग आफुहरु बैशाखमा भएको भ्रद सहमती प्रति ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
३ जेठमा राजपा दर्ता हुने ।
नवगठित राजपा पार्टी आउदो ३ जेठमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुदै छ । ६ ओटा मधेशी पाटीहरु द्धारा एकिकरण पश्चात बनेको नया पार्टी राजपाको विद्यान र घोषणा पत्रहरु तयार भए पछि नेताहरु दर्ताको प्रक्रिया अघि वढाएका हुन । नवगठित राजपाको सचिवालयले विदान सहित अन्य सवै डकुमेन्टहरु तयार पारे पछि अध्यक्षहरु मण्डलले त्यसलाई दर्ताको प्रक्रियामा अघि वढाउन निर्देशन गरेको छ । शुक्रवार नेताहरु वृषेशचन्द्र लाल, केशव झा, मनिष सुमन, सीपी सिंह सहितको टोली निर्वाचन आयोग पुगेर राजपाले तयार पारेको विद्यान देखि घोषणा पत्र सहितका कागजातहरु प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई देखाएका थिए ।
राजपाको विद्यान र निती कार्यक्रम तयार
६ ओटा मधेशी पार्टीको एकिकरण पश्चात बनेको नवगठित राष्टिय जनता पार्टीले आफनो विद्यान र निती कार्यक्रम तयार पारेको जनाएको छ । गएको १९ बैशाखमा काठमाडौमा बसेको एकिकृत पार्टीको प्रथम विस्तारित बैठकले पार्टी संरचनागत संस्थागत कामहरु गर्ने जिम्मा अध्यक्षहरुलाई दिएको थियो । अध्यक्ष मण्डलले सचिवालय नयां पार्टीको दर्ताका लागी आवश्यक पर्ने विद्यान, घोषणा पत्र देखि अन्य कागजातहरु तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो । राजपाको सचिवालय पछिल्लो केहि हप्ता यता त्यसमा काम गर्दै आएका थिए । सचिवालयका अनुसार विहिवार विद्यान सहित घोषणा पत्र लगायतका सवै कागजातहरुको अन्तिम रुप तयार भएको छ । भोली शुक्रवार सचिवालयले उक्त सवै कुरा अध्यक्ष मण्डललाई सुम्पने तयारी गरेको राजपाका नेताहरुले बताएका छन ।
संघिय गठवन्धन र प्रमुख दलहरु विच छलफल
नवगठित राजपा सहितको संघिय गठवन्धन र प्रमुख दलहरुका शिर्ष नेताहरु विच मंगलवार छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल संग् वालुवाटार छलफल गर्न पुगेका गठवन्धन नेताहरु संग उक्त वार्तामा नेपाली काग्रेस र एमालेका समेत शिर्ष नेताहरु सहभागी थिए । विना सविधान संशोधन निर्वाचनमा नजाजे अडानमा रहेको गठवन्धन अगामी रणनिती वनाउनु पुर्व एकचोटी प्रधानमन्त्रीसंग छलफल गर्ने निष्कर्ष सोमवार निकालेका थिए । गठवन्धनले सरकार र सतारुढ दलहरुले आफुहरु संग गरेको वाचा अनुसार विना संशोधन नै निर्वाचन गराउन लागेको भन्दै धोका दिएको चेतावनी पछिल्लो समयमा दिदै आएका छन ।
संघिय गठवन्धनले भोली प्रधानमन्त्रीसंग छलफल गर्ने
विना संविधान संशोधन निर्वाचनमा भाग नलिने बताउदै आएका संघिय गठवन्धनले भोली मंगलवार प्रधानमन्त्री संग छलफल गर्ने भएको छ । पछिल्लो समयमा सरकारले आफुहरु संगको सहमती कार्यन्वयन नगरेको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिदै आएको गठवन्धनको वैठक हिजो र आज गरी बसेको थियो । बैठकमा आन्दोलन घोषणा गर्नु पुर्व एक चोटी प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने निष्कर्ष नेताहरुले निकालेको बताएका छन । राजपा नेता बृषेशचन्द्र लालका अनुसार मंगलवार गठवन्धनले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर विना सविधान संशोधन निर्वाचन नगराउन आग्रह गरिने छन । लाल भन्छन, हामीले एकचोटी उहालाई भनी दिने कुरा गरेका छौ । त्यस पछि मात्रै गठवन्धनले आफनो रणनितीलाई अन्तिम रुप दिने नेताहरुले बताएका छन ।
संघिय गठवन्धनको बैठक सुरु
at 6:35 AM Posted by Dalan
उपेन्द्र यादवलाई संघिय गठवन्धनको संयोजकवाट निष्कासित गरेर महन्थ ठाकुरलाई संयोजकको जिम्मा दिए पछि गठवन्धनको बैठक सुरु भएको छ । विजुलीवजार स्थित राजपामा एकिकृत भएको तमलोपाको पार्टी कार्यलयमा आइतवार देखि महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा बैठक सुरु भएको छ । हिजो शनिवार मात्रै गठवन्धनका नेताहरुको भेलाले उपेन्द्र यादव गठवन्धनको पुर्व निर्णय विपरित माग सम्बोधन नहुदै निर्वाचनमा भाग लिएको भन्दै यादवलाई कारवाही स्वरुप निष्कासित गर्दै ठाकुरलाई जिम्मा दिएको थियो । यद्यपी यादवले आफुलाई त्यसवारेमा अहिले सम्म कुनै जानकारी नै नभएको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्दै आएका छन । ठाकुर संयोजक चयन भएसंगै गठवन्धनको तर्फवाट शनिवार नै विज्ञिप्ती जारी गर्दै सशोधन विना निर्वाचन नजाने भन्दै आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
संघिय गठवन्धनको संयोजकमा महन्थ ठाकुर ।
at 4:09 AM Posted by Dalan
निर्वाचनम भाग लिएको भन्दै उपेन्द्र यादवलाई गठवन्धनद्धारा कारवाही
मधेशी मोर्चा सहितको जनजातीहरुको संघिय गठवन्धनले उपेन्द्र यादवलाई गठवन्धनको पुर्व निर्णय विपरित निर्वाचनमा भाग लिएको भन्दै कारवाही गर्दै राष्टिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरलाई गठवन्धनको पनि जिम्मेवारी दिएको छ । विजुलीबजार स्थित पहिला तमलोपाको पार्टी कार्यलय रहेको स्थानमा आज बसेको गठवन्धनको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको छ ।
राष्टपति र प्रधानमन्त्रीद्धारा राजपा संग छलफल
राष्टपति विद्ययादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल नवगठित राष्टिय जनता पार्टी नेपालका नेताहरु संग छलफल गरेका छन । मधेशी मोर्चामा आबद्ध ६ ओटा पार्टीहरु द्धारा एकिकरण गरेर राजपा गठन भए पछि प्रधानमन्त्री र राष्टपतिले नवगठित पार्टीको धारणा र यी नेताहरुले पहिला देखि नै उठाउदै आएको सविधान संशोधन देखि स्थानिय निर्वाचन वारे छलफल गरेको नेताहरुले बताएका छन । मंगलवार राजपाको पहिलो बैठकमा निर्वाचनमा जान सक्ने नेतृत्वको सम्भावनाहरु प्रति केन्द्रिय सदस्यहरुले कडा आलोचना मात्रै होईन कि उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको फोरम निर्वाचनमा गएको प्रति समेत कडा टिप्पणीहरु गरेका थिए । राजपाको मंगलवार बैठक सकिए लगतै वुधवार साझ प्रधानमन्त्रीले राजपाका अध्यक्ष मण्डलसंग छलफल गरेका थिए भने शुक्रवार साझ राष्टपति भण्डारीले छलफल गरेका छन ।
संशोधन नभए दोस्रो चरणको निर्वाचनमा नजाने उपेन्द्र यादवको भनाई
पहिलो चरणको निर्वाचनका लागी हिजो भएको उम्मेदवार मनोयनमा भाग लिएको प्रति विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहदा फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले आफु संग गरेको वाचा अनुरुप सविधान संशोधन नभए दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आफु भाग नलिने प्रष्टाएका छन । वुधवार दिउसो पार्टी कार्यलयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यादवले प्रधानमन्त्रीले आफुलाई पहिलो चरणको निर्वाचन लगत्तै संशोधन गराउने आश्वासन दिएकाले आफु निर्वाचनमा भाग लिएको दावी गरे । यादव भने, यदी उहाहरुले वाचा अनुरुप संशोधन गर्न सक्नु भएन भने आफुहरु दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिन्नौ र त्यसतो अवस्थामा पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनको पनि कुनै अर्थ रहने छैनै । म यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई समेत प्रष्ट रुपमा भनीसकेका छौ, यादव भने, त्यती वेला हाम्रो पार्टी पुन आन्द्योलनमा उत्रन बाध्य हुनेछ ।
पत्रकार सम्मेलनमा वाडिएको प्रेस विज्ञिप्त
राजपाको पहिलो बैठक सम्पन्न
एकिकृत नयां पार्टीको संस्थागत गर्ने वारेमा ३ बुदे निर्णय
मधेशी मोर्चा सम्बद्ध ६ ओटा पार्टीद्धारा घोषणा गरिएको एकिकरण पश्चात एकिकृत पहिलो बैठक मंगलवार सम्पन्न भएको छ । काठमाडौको कालिकास्थान स्थित अमृतभोग प्यालेसमा आयोजना गरिएको राजपाको पहिलो बैठकले ३ बुदे निर्णय समेत गरेको छ । एकिकरण पश्चात घोषणा गरिएको नर्या पार्टीको कानुनी प्रावद्यान बमोजिम ३ ओटा निर्णय गर्दै राजपाको अव दर्ता प्रक्रिया अघि वढने छ ।
राजपाको पहिलो बैठक भोली बस्दै
मधेशी मोर्चा सम्बद्ध ६ ओटा पार्टीहरु द्धारा एकिकरण गरेर घोषणा गरिएको राष्टिय जनता पार्टीको पहिलो बैठक भोली देखि बस्दै छ । काठमाडौको कालिकास्थान स्थित अमृतभोग पार्टी प्यालेसमा भोली ११ बजे देखि बैठक सूरु हुने नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । एकिकृत भए पछिको केन्द्रिय कार्यसमितीको संयुक्त र छुटा छुटै बैठकले एकिकृत भएको नर्या पार्टीको वारेमा औपचारिक निर्णय गनु पर्ने छ, जुन पार्टी दर्ताका लागी निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नु पर्ने कानुनी प्रावद्यान छ ।
कसरी भयो मधेशी मिलाप ?
at 12:23 AM Posted by Dalan
सधै आपसी मतभेदमा रुमल्लिएको मधेश राजनितीमा मधेशी मोर्चा सम्बद्ध ६ पार्टीको एकिकरणले नया तरङ पैदा गरेको छ । कसरी सम्भव भयो यो एकीकरण ?
६ बैशाख, अबेर राती मधेशी मोर्चाका पांच अध्यक्ष ( तमलोपा–महन्थ ठाकुर, सद्भावना–राजेन्द्र महतो, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी–शरदसिंह भण्डारी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी–महेन्द्र यादव, फोरम गणतान्त्रिक–राजकिशोर यादव) ले एउटै पार्टी बनाउने निर्णय गरे । र, ७ बैसाखमा घोषणाको कार्यक्रम तय गरियो ।
७ बैसाख विहानैदेखि पांच अध्यक्षहरुले नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झालाई पनि नवोदित पार्टीमा मिसिन आग्रह गरे । तर झाले तत्कालका लागि उक्त एकीकरणमा सहभागी नहुने जवाफ फर्काए ।
घोषणा कार्यक्रम निर्धारित समयभन्दा दुई घण्टा ढिलो शुरु भयो । पांचै जना अध्यक्षले कार्यक्रममा बोले । पुछारमा तमलोपाका ठाकुर बोल्दै थिए । त्यही बेला झा टुप्लुक्क सभास्थल झुल्किए । हृदयेस त्रिपाठी र वशेषचन्द्रलालले उनलाई मञ्चमा डोराएर लगे भने राजकिशोर यादवले फुलमाला लगाइ दिए । केही घण्टा अघि एकीकरणमा तत्काल सामेल नहुने अडानमा रहेका झा किन एकाएक फेरिए । नेपाल सद्भावना पार्टीका महासचिव राजीव झा भन्छन्–‘आम मधेसी जनता र कार्यकर्ताको दवाब थेग्न नसकेपछि एकीकरणमा सहभागी भयौं ।’
यसरी हुदैछ संस्थागत नयां एकिकृत मधेशी पार्टी - राष्टिय जनता पार्टी
at 7:22 AM Posted by Dalan
गएको ७ बैशाखमा ६ ओटा मधेशी पार्टीहरु द्धारा एकिकरण गर्दै घोषणा गरिएको नयां पार्टी राष्टिय जनता पार्टी अव कसरी संस्थागत हुने छ ? यस अघि छुटा छुटै संरचनामा रहेको यी ६ ओटै पार्टीहरु कसरी एउटै पार्टीको रुपमा समायोजन हुदै छ ? यो तपाई हामी सवैको चासोको विषय हुन ? मधेश देखि काठमाडौ सम्म सवैलाई आश्चर्यचकित हुने गरि ६ बैशाखको अवेर राती मधेशी मोर्चामा आबद्ध ६ ओटा पार्टीका अध्यक्षहरु एकता गर्ने निर्णय गरे । र ७ बैशाखको दिउसो काठमाडौमा एएटा विशेष समारोहको आयोजना गरेर एकताको घोषणा गर्दै नयां पार्टी राष्टिय जनता पार्टीको घोषणा गरेका थिए । जसको चुनाव चिन्ह देखि झन्डा सहित सवै कुराहरु नयां राखिएको छ ।
मधेशी मोर्चाका छ घटक द्धारा एकिकरण - नयां पार्टी घोषणा
at 10:36 PM Posted by Dalan
नयां पार्टीको नाम राष्टिय जनता पार्टी
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका ६ घटकले पार्टी एकिकरण गर्दै नयां पार्टीको घोषणा गरेका हुन । महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी, महेन्द्र यादव, राजकिशोर यादव र अनिल झाले पार्टी एकिकरण गर्दै नयां पार्टी राष्टिय जनता पार्टीको घोषणा गरेका हुन । मोर्चामा अहिले सम्म सात ओटा दलहरु थियो । उपेन्द्र यादव वाहेक अन्य पार्टीहरुले पछिल्लो केहि समय यता एकिकरणका लागी बाक्लो दौडधुपमा थियो । त्यही दौडधुपका परिणाम स्वरुप हिजो वुधवार अवेर राती सम्म शिर्ष मधेशी नेताहरुको बैठकले पार्टी एकिकरणको टुगो लगाएका थिए । वुधवार अवेर राती टुगो लागेको मधेशी पाटीृहरुको एकता विहिवार दिउसो राजधानीमा घोषणा गरिएको हो ।
पार्टीको नाममा ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी’